Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်)
Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အဆစ်မြစ်ရောင်ရောဂါများ၊သွေးရောဂါများ၊ဟော်မုန်းမညီမျှမှုများ၊ခုခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်သောပြဿနာများ၊ဓါတ်မတည့်သော ပြဿနာများ၊အရေပြားနှင့် မျက်စိဆိုင်ရာ အချို့သော ပြဿနာများ၊အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၊အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အချို့သော ပြဿနာများတွင် Dectancyl® (dexamethasone) ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
ထို့အပြင် သွေးကင်ဆာ နှင့် ပြန်ရည်ကြောကင်ဆာ တို့တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။adrenal ဂလင်းမှ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်ဟော်မုန်းလုံလောက်အောင် မထုတ်ပေးနိုင်သော အခြေအနေတွင်လည်း အစားထိုးပစ္စည်းအဖြစ် Dectancyl® ကို သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Dectancyl® ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်ဆေးအဖြစ် သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ဗိုက်အောင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အစာတခုခု သို့မဟုတ် နွားနို့နှင့် သောက်ပါ။
သင့်ဆရာဝန်မှ အထူးတလည်ညွှန်ကြားထားခြင်းမျိုးမရှိပါက အစာ သို့မဟုတ် ရေ/နွားနို့ တဖန်ခွက်ဖြင့် သောက်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဆေးကို တနေ့တခါ သောက်ပါက မနက်ကိုးနာရီ မတိုင်ခင် သောက်ပါ။ အာနိသင်သက်ရောက်မှု အကောင်းဆုံးရနိုင်ရန်အတွက် ဆေးကို နေ့စဉ်အချိန်မှန်မှန် သောက်ပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် သက်သာသွားပြီဟု ယူဆသည့်တိုင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဆေးပတ်လည်အောင် သောက်ရပါမည်။ ဆေးသောက်ရမည့် အကြိမ်ရေ၊အချိန်၊ပမာဏစသည်တို့ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာပါ။
ဆရာဝန်နှင့် မတိုင်ပင်ဘဲ မိမိသဘောဖြင့် ဆေးသောက်ရပ်လိုက်ခြင်းမျိုး မလုပ်ရပါ။ သင့်ရောဂါမသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Dectancyl® (dexamethasone) ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Dectancyl® (dexamethasone) ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Dectancyl® (dexamethasone) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
Dectancyl® (dexamethasone) ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအချက်များရှိလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
Dectancyl® နှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်။
အစာအိမ်အနာဖြစ်ဖူးလျှင်၊အက်စ်ပရင်ဆေးပြား ပမာဏများပြားစွာ သောက်နေရလျှင် သို့မဟုတ် အဆစ်အမြစ်ရောင်ဝေဒနာအတွက် ဆေးသုံးစွဲနေရလျှင်။
Dectancyl® သည် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ပိုမိုထိန်းချုပ်ရခက်စေတတ်သဖြင့် သင့်တွင် ဆီးချိုရှိလျှင် သွေးတွင်းသကြားဓါတ် ပမာဏကို ပုံမှန်တိုင်းတာစစ်ဆေးပြီး ရလာဒ်များကို သင့်ဆရာဝန်အား အသိပေးရမည်။
ဆရာဝန်မှ အထူးတလည် ညွှန်ကြားထားခြင်းမျိုးမရှိလျှင် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် အရေပြားစစ်ဆေးမှုများကို မပြုလုပ်ရပါ။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤဆေးကို ကာလကြာရှည်စွာ သုံးစွဲခဲ့ရပါက သင့်ခန္ဓါကိုယ်အနေဖြင့် (ဖိစီးမှုများကို ခံစားရသောအချိန်တွင်) သဘာဝ ဟော်မုန်းများကို လုံလောက်အောင် ထုတ်ပေးနိုင်တော့မည် မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် ဆေးပမာဏကို သင့်တော်သလို ချိန်ညှိပေးရပါမည်။ သင်သည် လွန်ခဲ့သော ၁၂လအတွင်းက ဤဆေးသုံးစွဲမှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့သူဖြစ်လျှင် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အနေဖြင့် ဖိစီးမှုများကို ခံစားရသည့်အချိန်တွင် ဆေးပြန်လည် သုံးစွဲရန် လိုအပ်ပေမည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် လွန်ခဲ့သော ၁၂လအတွင်း ဤဆေးကို သုံးစွဲခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သွားဆရာဝန်အား ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီ အသိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ဤဆေးကို သုံးစွဲနေစဉ်ကာလအတွင်း အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစီးမှုများကို ကာကွယ်လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် အရက်လျှော့သောက်ရပါမည်။ မကြာသေးမီက ပိုလီယိုအစက်ချကာကွယ်ဆေး သောက်သုံးထားသူများ၊တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသူများ သို့မဟုတ် ဝက်သက်၊ရေခြောက်ပေါက်ထားသူများအနား မကပ်ပါနှင့်(အကယ်၍ သင်ငယ်စဉ်က အဆိုပါရောဂါများ ဖြစ်ပွားထားခြင်း မရှိလျှင်)။ သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါ ကူးစက်ရောဂါများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းခံရပြီး ယခင်ကဖြစ်ပွားထားခြင်းလည်း မရှိသေးလျှင် ဆေးကုသမှုကို အမြန်ခံယူရပါမည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
မဖြစ်မနေလိုအပ်မှသာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဤဆေးကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ အကျိုးအပြစ်များကို သေချာစွာ သိရှိနိုင်စေရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးသည် နို့ရည်ထဲတွင်ပါလာနိုင်သဖြင့် မွေးကင်းစကလေးအပေါ် မလိုလားအပ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးသုံးစွဲနေစဉ်ကာလတွင် မိခင်နို့ မတိုက်သင့်ပါ။
Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် dexamethasone ကို ပမာဏအနည်းဆုံးနှင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ ကာလအတိုဆုံးသာ သုံးစွဲသင့်ပါသည်။
အရေပြား ပါးလျပြီး သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း။
ကလေးငယ်များတွင် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးခြင်း။
စိတ္တဇ လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့
သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
 Phenytoin (Dilantin)
 Rifampin (Rifadin, Rimactane)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Dectancyl® (dexamethasone) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dectancyl® (dexamethasone) ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
ကျောက်ကပ် သို့မဟုတ် အသည်းရောဂါရှိလျှင်။
ခန္ဓါကိုယ်တွင်း သတ္တုဓါတ်များ နည်းနေလျှင်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကနဦးဆေးပမာဏကို ဝ.၇၅-၉ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်သောက်ရပါမည်။ ဆေးအပေါ် တုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ပြီး ကနဦးဆေးပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆနိုင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Dectancyl (ဒက်တန်ဆီးလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Dectancyl® (dexamethasone) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား : Dexamethasone Acetate ဝ.၅ မီလီဂရမ်။
Dectancyl® (dexamethasone) ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
DECTANCYL® (DEXAMETHASONE) : DECTANCYL® (DEXAMETHASONE).
http://www.Dectancyl® (dexamethasone) e.com/?c=drug&s=Dectancyl. Accessed November 18, 2016
SKINCARE - DECTANCYL® (DEXAMETHASONE).
Accessed November 18, 2016
Dectancyl® (dexamethasone) Drug Information.
http://www.catalog.md/drugs/Dectancyl.html. Accessed November 18, 2016